Soomaaliya iyo Masar oo kala saxiixday heshiis ku aaddan ganacsiga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Soomaaliya iyo Masar oo kala saxiixday heshiis ku aaddan ganacsiga
20th April 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Kulan ay magaalada qaahira ku yeeshay wasiirka wasaarka ganacsiga iyo wershedaha Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo dhiggiisa dalka Masar Daariq qaabii,ayaa lagu gorfeeyay sidii loo soo noolayn lahaa xiriir dhanka ganacsiga ee labada dal.
Heshiis horu dhac ah oo laga gaaray dhanka is dhaafsiga ganacsiga iyo dar-dar gelinta hawlaha maal-gashi ayaa lagu go’aamiyay in la sameeyo guddi arrimahaasi taabba geliya oo ay madax ka yihiin wasiirrada ganacsiga ee labada dal, kaasoo fududeyn doona caqabad kasta oo ku hor gudbanaan karta tallaabbadan.
Labada dhinac ayaa is dhaafsan doono tababarro la xiriira sare u qaadidda hawlaha hir gelinta ganacsiga iyo ka faa’iideysiga fursadaha maag gashi,taasoo ay qayb ka noqon doonaan xubno ka tirsan ganacsatada labada dal iyo quburo xagga maal gashiga ah.
Soomaaliya iyo Masar ayaa lahaa xiriir qoto dheer oo xagga ganacsiga ah,kaasoo wiiqmay dhowr iyo labaatan sana ka hor markii ay meesha ka baxday dowladdii xilligaa dalka ka arrimineysay,waxaana wixii ka dambeeyay 2012-kii soo laba kacleeyay xiriirka labada dhinac maaddaama la helay nidaam dowladeed oo laysku hallayn karo.
Al-Shabaab oo War kasoo saartay Soomaalidii Badda ku dhamaatay iyo Sababta ku kaliftay in ay Tahriibaan